Samachar Batika || News from Nepal » यस्तो छ विवाहित महिलाले सिउँदोमा सिन्दुर भर्नुको रहस्य
यस्तो छ विवाहित महिलाले सिउँदोमा सिन्दुर भर्नुको रहस्य
हिन्दु धर्ममा सिन्दुर विवाहित महिलाहरुको विवाहको प्रतिक हो। तर यो कुरा बुझ्न जरुरी छ की आखिर विवाहित महिलाले सिउँदोमा सिन्दुर लगाउनुको पछाडिको कारण के छ ?
मान्यताअनुसार सिउँदोमा सिन्दुर लगाउनाले पतिको दिर्घायु हुने र महिलाको सौभाग्यमा वृद्धि हुन्छ। आखिर महिलाले सिउँदोमा सिन्दुर किन भर्छन त ? आउनुहोस, थाहा पाईराखौं यसको पछाडिको धार्मिक मान्यता
एक पौराणिक कथाका अनुसार धीरा र वीरा नामक एक युवा युवती थिए। धीरा एक युवती थिइन् जो अति नै सुन्दर र फुलझैँ कोमल थिइन् त्यस्तै वीरा निकै नै साहसी पुरुष थिए। यी दुईका जोडी अति नै मनमोहक थियो। यदि कोहि यिनीहरुलाई देख्थे त् उनीहरुको जोडी आफ्नो मन मष्तिसकबाट हटाउन सक्दैन थे।
दुवै एकअर्काका लागि बनेका थिए र एकअर्काका लागि उचित थिए। कालान्तरमा दुबैले विवाह पनि गरे। यसै क्रममा एकदिन यी दुई शिकारमा निस्किए त्यसैबखत एक कालिया नामक दानवको गिद्दे नजर धीरा माथि पर्यो। धीराको सुन्दरता देखि कालियाको मनमा नकारात्मक विचार आउन थाल्यो र उनले धीरालाई आफ्नो बनाउने निर्णय गरे। शि’कार गर्दा गर्दै रात पर्यो।
धीरा र वीराले जंगलमै रात कटाउने फैसला गरे र एक पहाडमा गएर बास बसे। त्यसैबेला धीरालाई पानी प्यास लाग्यो बिरा उनका लागि पानि लिन गए। बिरा पानी लिन गएको मौका पारि कालियाले वीरामाथि आ’क्र’मण गर्यो। कालियाको आ’क्रम’णले वीरा नराम्रोसँग घाइते भए ।
घाइते वीराको चिच्याहट सुनी धीराले कालियामाथि आ’क्र’मण गरि उनलाई मा”रि’दिईन। धीराको यस्तो साहस देखेर वीरा खुसी भई आफ्नो र’ग’तले र’गतले उनको सिउँदो भरिदिए। भनिन्छ त्यसैबेलादेखि विवाहित महिलाले सिउँदोमा सिन्दुर लगाउने परम्परा चलिआएको हो।
उसो त हिन्दु सभ्यतामा सिन्दुरलाई लिएर हनुमानको कहानी पनि निकै नै प्रचलित छ तर धीरा र वीराको यस कहानीलाई पनि कतिपयले मान्ने गरेका छन। ईताजा खबर बाट।
प्रकाशित मिति १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०७:२४